पछिल्लो २४ घण्टामा ३५५६ नयाँ संक्रमित थपिए, १८ जनाको ज्यान गयो
२७ आश्विन २०७७, मंगलवार १७:४४
असोज २७, काठमाडौ –
आज नेपाल्लमा थप ३ हजार ५५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या १ लाख १५ हजार ३५८ पुगेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप १८ जनाको कोरोनाबाट ज्यान गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ६६३ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज नेपालमा १ हजार ५०३ जना कोरोना संक्रमण निको भएका छन्। यससँगै हालसम्म कोरोना संक्रमण निको हुनेको संख्या ७८ हजार ७८० पुगेको छ । आज १५ हजार ५७७ जनाको पिसिआर परिक्षण गरिएको छ भने क्वारेन्टिनमा ४ हजार ७९५ जना रहेका छन्। हाल आईसीयूमा ३०७ जना र भेन्टिलेटरमा ६६ जनाको उपचार भइरहेको छ।
मुलुकमा हाल सक्रिय संक्रमितको सख्या ३५ हजार ९१५ जना रहेका छन्। तीमध्ये १५ हजार ४८ जना संस्थागत आइसोलेसनमा र २० हजार ८६७ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्।
२४ घण्टामा थपिए ४ हजार ४७ संक्रमित, ९ जनाको मृत्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा २०७१ संक्रमित थपिए, २२ जनाको ज्यान गयो
डा. केसि र सरकार बीच सहमति , अनशन आज तोडिने
विश्वभर कोरोनाको अवस्था कुन देशमा कस्तो ?
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक भारी संख्यामा बढ्दै
कस्तो छ नेपालमा कोरोनाको पछिल्लो अवस्था ?
देशभर थपिए २ हजार ४४० जना कोरोना संक्रमित
पछिल्लो २४ घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित थपिए, निको हुने पनि अहिलेसम्मकै धेरै
पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए १५ सय ५९ संक्रमित , ११ सय ५७ डिस्चार्ज